Tag: WordPress | Martech Zone
Maitiro Ekutevera Elementor Fomu Kuendesa muGoogle Analytics Zviitiko uchishandisa JQuery
China, Gunyana 23, 2021 China, Gunyana 23, 2021 Douglas Karr
Ndanga ndichishanda pane yevatengi WordPress saiti kwemavhiki apfuura ayo ane akaoma mashoma kuomarara. Ivo vari kushandisa WordPress pamwe nekubatanidzwa kuAlexCampaign yekurera inotungamira uye kubatanidzwa kweZapier kuZendesk Tengesa kuburikidza neElementor Mafomu. Iyo yakanaka system ... kubanisira padonhwe mushandirapamwe kune vanhu vanokumbira ruzivo uye kusundira lead kune yakakodzera mutengesi mumiriri kana akumbirwa. Ndiri kunyatso kufadzwa nefomu raElementor kuchinjika uye tarisa uye
Tumira Email Kupfuura SMTP MuWordPress Ine Microsoft 365, Live, Outlook, kana Hotmail
China, August 12, 2021 China, August 12, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uchimhanyisa WordPress seyako zvemukati manejimendi sisitimu, iyo sisitimu inowanzo gadzirirwa kupusha email mameseji (senge mameseji mameseji, password zviyeuchidzo, nezvimwewo) kuburikidza neako Anogamuchira. Nekudaro, iyi haisi mhinduro inotaurika nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka: Vamwe varidzi vanovharira kugona kutumira maemail anobuda kubva kuseva kuti vasave chinangwa chevabiridzi kuti vawedzere malware anotumira maemail. Iyo email inouya kubva kuseva yako kazhinji haina kusimbiswa
Thursday, August 12, 2021 Thursday, August 12, 2021
WordPress: Bvisa uye Redirect A YYYY / MM / DD Permalink Structure neRegex uye Rank Math SEO
NeChishanu, Nyamavhuvhu 6, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Kurerutsa yako URL chimiro inzira yakanaka yekukwirisa yako saiti nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka. Marefu ma URL anonetsa kugovana nevamwe, anogona kugurwa mumavara edhita uye maemail edhita, uye akaomarara URL dhairekitori zvivakwa anogona kutumira zvisirizvo zviratidzo kunjini dzekutsvaga pane kukosha kweako zvemukati. YYYY / MM / DD Permalink Maumbirwo Kana yako saiti iine ma URL maviri, ndeupi waungafunga kuti akapa chinyorwa chakakosha zvakanyanya?
Friday, August 6, 2021 Tuesday, August 24, 2021
ActiveCampaign: Sei Kumaka Kunokosha Kune Yako Blog Kana Kwasvika kune RSS Email Kubatanidzwa
Chishanu, June 25, 2021 Chishanu, June 25, 2021 Douglas Karr
Chimwe chinhu chandinofunga kuti hachishandiswi muindasitiri yeemail ndiko kushandiswa kweRSS feeds kuburitsa zvirimo zvemakampeni eemail. Mazhinji mapuratifomu ane RSS ficha uko iri nyore nyore kuwedzera feed kune yako email tsamba tsamba kana chero imwe mushandirapamwe wauri kutumira kunze. Izvo iwe zvausingazive, zvakadaro, ndezvekuti zviri nyore nyore kuisa zvakanyatsojeka, zvakaiswa mukati, mumaemail ako pane pane rako rese blog
Friday, June 25, 2021 Friday, June 25, 2021
Kushanda Naiyo .htaccess Faira MuWordPress
Chipiri, April 27, 2021 Chipiri, April 27, 2021 Gary Stevens
WordPress ipuratifomu yakakura inoitwa zvese zvirinani nekunyatsotsanangurwa uye kusimba kweyakajairika WordPress dhibhodhi iri. Iwe unogona kuwana zvakawanda, maererano nekugadzirisa nzira iyo yako saiti inonzwa uye mashandiro, nekungoshandisa zvishandiso zvakaitwa neWordPress kwauri seyakajairwa. Kunouya nguva muhupenyu hwese hwemuridzi webhusaiti, zvisinei, apo iwe pauchazoda kupfuura izvi kuita. Kushanda neiyo WordPress .htaccess